I-Assassin's Creed Valhalla Ukunwetshwa Kuguqulwe Kwaba Umdlalo Omusha Ozimele! - Ukudlala
I-Assassin's Creed Valhalla Ukunwetshwa Kuguqulwe Kwaba Umdlalo Omusha Ozimele!
Ngokwemibiko, i-Ubisoft iguqule ukunwetshwa kwe-Assassin's Creed Valhalla equkethe i-Basim yaba umdlalo ozimele ozokhishwa kulo nyaka noma ngo-2023.
NgokukaBloomberg, abantu abajwayelene nale phrojekthi, ebizwa ngokuthi i-Rift, bathe ngeke ibe nomhlaba omkhulu ovulekile kodwa izogxila ekudlaleni okucashile futhi izoba yincane ngobubanzi kunemidlalo yangaphambilini ye-Assassin's Creed.
I-Rift kusolwa ukuthi yaguqulwa yaba umdlalo wayo ngasekupheleni kuka-2021 ukuze igcwalise uhlelo lokukhululwa oluncane luka-Ubisoft, futhi kulindeleke ukuthi ikhishwe ngaphambi kwe-Assassin's Creed Infinity, ukuvela kwe-franchise okuzayo okunamahemuhemu okuthi iyinkundla ye-Fortnite eguqukayo. umdlalo.
I-Eurogamer ithe ijwayelene neRift futhi ifunde emithonjeni ethembekile ukuthi izokwenzeka eBaghdad ngaphambi kwemicimbi yaseValhalla. U-Basim usevele uqinisekisiwe ukuthi uyinzalo ye-Abbasid Caliphate, inhloko-dolobha yayo i-Baghdad yasebenza njengendawo yokubeka i-Valhalla ezingxenyeni zekhulu lesi-9 lapho indaba yenzeka.
Ngokusho kwe-Bloomberg, umkhulumeli we-Ubisoft uthe inkampani ayiphawuli ngamahemuhemu noma ukuqagela njengoba yenza kabi emaqenjini ethu okuthuthukisa kanye nomphakathi.
Ngaphezu kwalokho, i-Ubisoft inohlu oluqinile nolujabulisayo lwezihloko kumzila wethu, womabili amabhrendi asunguliwe anezindaba ezisontekile nezici ezintsha, nama-IP amasha sha azoqhubeka nokushintsha indawo yemidlalo yevidiyo yanamuhla. ngokusho kwenkampani.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi u-Valhalla uzokhipha ngoNovemba 2020, u-Ubisoft uqhubekile nokwengeza okuqukethwe okusha emdlalweni, okuhlanganisa nemishini ehlanganisa u-Kassandra, umlingiswa oyinhloko we-Assassin's Creed Odyssey, e-Valhalla ochungechungeni lwe-crossover yokuqala ngqa.
Ukunwetshwa okukhulu okulandelayo kweValhalla, iDawn of Ragnarök, kulindeleke ukuthi kukhishwe ngoMashi 10 futhi kuzovumela abadlali ukuthi babambe iqhaza lika-Norse God Odin njengoba elwela ukuvimbela ukuphela komhlaba.
Njengoba kuchazwe i-IGN, i-Assassin's Creed Valhalla iwumdlalo omuhle onongenelo omkhulu, onesibindi, futhi omuhle ngendlela ehlekisayo ochungechungeni olugcina luletha inkathi elindelwe ngabomvu yamaViking kanye nembibizane yepolitiki encibilikayo yeNkathi Yobumnyama yase-England.
I-SpellForce 3 Iqinisiwe: Iza Kumakhonsoli Kulo Disemba!
Idethi yokukhishwa kweFallout 5: PS4, PS5, Xbox, PC, Switch - Yonke Imininingwane!
I-MrBeast Net Worth: Umthombo wemali yakhe engenayo kanye nesiteshi sika-2021